Faritra Analamanga omaly ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra Atoa Ramananantony Lalaina. Nambarany fa efa andraikitry ny FEFI ny mikarakara ny resaka vola aloan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra eny anivon’ny sekoly rafitra iray napetraka hikarakara izany. Io FEFI io no mamaritra ny latsakemboka aloan’ny ray aman-dreny tsirairay avy amin’ny alalan’ny fihaonam-be raha amin’ny alalan’ny fihaonam-be irery ihany koa no manova na manafoana izany. Misy ny fitanana an-tsoratra izany hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity no sady misy taratasy manamarina ny nahatongavan’ny ray aman-dreny tsirairay avy ihany koa hanaporofoana fa nifanekena ny zavatra rehetra tapaka tao. Tsy midika izany fa tsy mandoa vola intsony ny ray aman-dreny satria izay tsy vitan’ny fanjakana ao amin’ilay sekoly toy ny fandoavana ny karaman’ireo mpampianatra tsy voaray ho mpiasam-panjakana… dia tsy maintsy zakain’ny FEFI avokoa. Tsy tokony hafangaro araka izany ny filazana fa tsy mandoa vola ny fampianaran-janaka eny amin’ny EPP sy ny adidy tsy maintsy hiantsorohan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra ao amin’ilay sekoly hianaran’ny zanany.